AHS Nyeredzi Taissa Farmiga Achatanga Nyeredzi mu 'Kubata' Spin Off 'Iyo Nun' muChinyorwa Chebasa
musha Horror Varaidzo Nhau AHS Nyeredzi Taissa Farmiga Achatanga Nyeredzi mu 'Kubata' Spin Off 'Iyo Nun' muChinyorwa Chebasa
by arun April 24, 2017
yakanyorwa na arun April 24, 2017
Yakanyorwa naPatti Pauley
Nhau hombe dzinobuda mukutyisa Hollywood mangwanani ano seNew Line yazivisa izvozvo American Horror Story uye Vasikana Vokupedzisira nyeredzi Taissa Farmiga yakagadzirirwa kuratidzira wechidiki munun mune anotarisirwa kwazvo Kutaura spinoff, The Nun. Nhau idzo dzakataurwa chete ne Deadline, inouya sechishamiso chakazonaka uno Muvhuro-est weMuvhuro ', sezvo ini ndichivimba segehena haina kuona iri kuuya. Kunyange zvakadaro, zvinonzwisisika sezvo maFarmigas 'asiri vaeni kune Kubvumirana zvakasikwa.
Chirevo ichi chinorwadza sezvo hanzvadzi yaTaissa mukuru, Vera Farmiga nyeredzi mune ese ari maviri James Wan's Kutaura mafirimu senge psychic Lorraine Warren padivi paPatrick Wilson saEd Warren. Mugadziri wechinotyisa chiri kuuya, James Wan iye pachake, akataura kufara kwake nekuita Taissa ajoine vatambi kuburikidza neTwitter:
Mauya @taissafarmiga kumhuri! Chinangwa ndechekushanda pamwe chete nemaFamaigas @VeraFarmiga #TheNun #talentedsiblings https://t.co/ZlWAKbKq47
Iyo firimu inotungamirwa naCorin Hardy (Iyo Hallow) uye yakanyorwa na Annabelle uye Stephen King's IT munyori Gary Dauberman pamwe naJames Wan uyo akagarawo pachigaro chevagadziri naPeter Safran, ndiye wechipiri spinoff mutambi kubva kuThe Conjuring mafirimu kuti awane yake hombe-bhajeti flick. Uye hazvina kunyatso kuoma kuona nei. Iyo Nun iyo yakatanga kuoneka mukati Iyo Inonongedza 2 yaive zana muzana% chinhu chinotyisa kwazvo nezve iyo bhaisikopo. Kunyangwe kuoneka kwacho kwanga kuri kupfupi, zvaive zvakakwana kuti ugare kure nemachechi eKatorike kwese kwese, uye uchingopa avo vanopinda izvo zvikoro zvakaomarara zvemasisita, hope dzinotyisa kwemavhiki ekupedzisira.
Iwe unofungei nezvaTaissa Farmiga achitora pane ino yemazuva ano inotyisa basa? Ridza pasi pazasi, uye mira nekuwedzera The Nun nhau dzinobuda!
Yakaratidzwa mufananidzo wechikwereti: ComingSoon.net
kufungidzira spinoffcorin hardyGary DaubermanHorror Movie Newsmafirimu anotyisaJames WanTaissa FarmigaHunyengeriThe Nuniyo movie yemununanouya anotyisa mafirimu
YeFunko's 'Hanzvadzi Nzvimbo' Zvimiro Zvinouya Iri Zhizha
"20 Masekondi Kurarama": Kubvunzurudza Vagadziri Ben Rock naBob DeRosa